Mashiinada tolida ee heesaha, kee ayaa iibsanaya? Moodooyinka ugu fiican halkan!
ka Mashiinada dharka tolida Dhaqan weyn ayay ka dambeeyaan. Waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid ah mashiinnada ugu da'da weyn. Marar badan ka dib, waxay u muuqataa in Isaac Singer uu suurtogaliyay in mishiinka dharka lagu tolo, oo leh fursado waaweyn.
Dabcan, in yar oo yar, horumaradu waxa ay noqdeen kuwo aad u cajiib badan. Haddaba maxaa ka wanaagsan inaad ku iibsatid dhammaantood marka loo eego mishiinnada dharka lagu tolo ee Fannaaniinta. Laga soo bilaabo makaanikada ilaa qalabka elektaroonigga ah, iyada oo la sii marayo kuwa dhejiska ah. Ikhtiyaarada dhammaan dhadhanka iyo dhammaan shaqooyinka. Ma u xiisi doontaa iyaga?
Fanaanada Farsamada Tolida
Hoos waxaad haysataa liiska qaar ka mid ah moodooyinka Mashiinnada tolida farsamada ee heesaha ugu caansan ee isticmaala dhexdooda. Kee baad door bidaysaa?
Nidaamka gariiradda toosan leh ballac ilaa 5 mm
Isku hagaajinta cadaadiska cagta ee toosiyaha ah iyo 2 boos oo irbado ah
Waxay leedahay dooraha ballaca zigzag iyo maamulaha xiisadda dunta gacanta.
Cabirka Wax soo saarka: 38 x 17 x 28 cm
Heesta Dhaqanka 2273 -...
Mashiinka tolida oo toos ah oo leh 22 nashqadood
Waxa ku jira dalool toos ah oo hal-tallaabo ah
Iyada oo leh cagaha riixaha ee si degdeg ah loo sii daayo iyo 4-tallaabo oo badhan oo toos ah
Samee Simil Overlock tolmo iyo tol aan la arki karin
Tolida irbad keli ah iyo laba-jibbaaran
Fanaanada 2282 Dhaqan -...
Mashiinka tolida gacanta oo bilaash ah oo la qaadi karo oo leh 32 adeeg, tolmo dabacsan oo qurxin leh
Iyada oo si toos ah loo yaqaan bobbin winder iyo xulashada dhererka tolmada
Waxay leedahay dalool badhan oo hal tallaabo ah iyo kabaalka dib-u-celinta
Fanaanadii 1409 balan qaad -...
Saliida asalka ah...
Saliida Saliida ee Fannaaniinta Dhabta ah ee Mashiinnada Tolidda Qoryaha Hubka DF 900268
HEESTA asalka ah
Sidoo kale waa mishiin aad u fudud in la isticmaalo. Aad loo maareyn karo, iyo sidoo kale si sahlan loogu diyaargaroobo inaad ku bilowdo hawlaha aad jeceshahay. Shaki la'aan, aasaasiga ah ee bilawga ah iyo mid aad u dhaqaale badan si lacagtu aysan dhibaato u ahayn. Halkan keen.
Dhaqan faneedka 2250
Waa mid ka mid ah mishiinnada harqaanka ee Fannaaniinta ee ugu iibsiga badan. Waxay u tahay qiimaha ay u leedahay lacagta iyo sidoo kale fududaanteeda. Sidoo kale loogu talagalay bilowga ah, oo leh hawlo yar laakiin aad isticmaali doonto, hubaal ahaan.
Haddii ay ku habboon tahay baahiyahaaga, waxaad iibsan kartaa Dhaqanka Heesaha 2250 Halkan, kaliya waxay kugu kici doontaa ilaa 130 euro.
Dhaqan faneedka 2259
Fanaanada 2259 Dhaqan -...
mashiinka in Waxay leedahay qiimeyn aad u wanaagsan.. Iyada oo dabayl toos ah iyo qaab-dhismeedkeeda gudaha ayaa ka samaysan bir. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay cudud bilaash ah iyo doorasho aad u fudud oo tolid ah.
Qiimaheedu aad buu u jaban yahay wuxuuna ka dhigayaa mid aan la celin karin si aad awooddo halkan ka iibso
Dhaqan faneedka 2263
Heesta Dhaqanka 2263 -...
Tayada sare ee isticmaalka aad u fudud. Waxay u fiicnaan doontaa bilawga bilawga ah ee ka bilaabaya adduunka tolida. Waxay leedahay dhowr kontarool oo aad ka dooran karto nooca tolmada iyo dhererkeeda. Dabcan Markaad barato oo aad rabto in yar oo dheeraad ah, waxay noqon doontaa mid gaaban.
Mashiinkan dharka lagu tolo waa mid raqiis ah, 149-ka Yuuro ee ay ku kacayso ayaana ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Haddii aad rabto, halkan ka iibso
Dhaqan faneedka 2282
Shaqada guriga ka sokoow, waxaad u ogolaan kartaa male-awaalkaagu inuu ku socdo mashiinkan. Waxay leedahay 32 tol, laba boos oo irbado, dunta iyo sidoo kale wiish si toos ah.
Ma rabtaa Halkan ka iibso, waxaad ku haysataa dalabka isku xirka hore.
Heesaaga Culus 4423
Fanaanada SMC4423 Duty
Una mashiinka semi-xirfadeed laakiin taasi waxay ku haboonaan doontaa isticmaalka gurigaaga. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka siinaya faa'iido weyn oo aad u baahan tahay si ay u noqoto mashiin adkaysi u leh, markaa adigaa leh. Si degdeg ah ayuu u tolaa oo awood weyn buu leeyahay.
Semi-xirfadeed laakiin kufiican inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato shaqadaada. Laga soo bilaabo awoodda korodhay ilaa la awoodi karo nooc kasta oo dhar ah iyo sidoo kale tolmo.
Kani waa nooca mashiinka tolista ee Fannaaniinta oo aad awoodid halkan ka iibso
Fanaanada Hibada 3321
Fanaanada Hibada 3321...
Mar labaad waxaan ku soo laabanaa mishiinada dadka xoogaa bilow ah. Laakiin kiiskan, marka lagu daro tayada aasaasiga ah ee ay ku siin karto, waxay leedahay sifooyin kale si aad u horumariso shaqadaada. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso tolmo yar oo cufan iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ay sidoo kale leedahay dhererka zigzag la hagaajin karo.
Qiimaha mashiinka dharka lagu tolo ee Fannaaniinta ayaa ku dhow 170 euro oo aad awoodid halkan ka iibso.
Fanaanada Hibada 3323
Waxay leedahay 23 tol oo aan dhihi karno 6 waa aasaas, 12 qurxinta iyo 4 laastikada. Geli, qaar badan, gudaha xadka sare-dhexe. Aad u fudud in la isticmaalo si loo gaaro natiijooyin xirfadeed.
Haddii aad jeclayd mishiinkan, qiimihiisu waxa uu ku dhaw yahay €175 oo aad awoodid halkan ku noqo.
Fanaanada Fudud 3232
Heesaaga Fudud 3232 -...
Xaaladdan oo kale waxaan leenahay 32 tol. Dabcan, si aan u sii deyno hal-abuurkayaga. Waxaa ka mid ah, waxaa jira dabacsanaan iyo sidoo kale qurxinta. Goynta dunta dambe, iyo sidoo kale iftiinka iyo laba boos oo irbado, ayaa shaqadeena ka dhigi doona mid fudud.
qiimihiisu waa 179 yuuro waadna awoodaa halkan ka iibso
Fanaanada Mashiinada Tolida Elektarooniga ah
Hoos waxaa ku yaal liiska Fannaaniin elektaroonik ah moodooyinka harqaanka ugu wanaagsan ee ay qiimeeyeen isticmaalayaasha.
Fanaanada Starlet 6680 -...
Elektroonik oo leh 80 tol: samee wax kasta oo aad rabto, shaqsiyayso oo qurxi gurigaaga iyo dharkaaga...
Way ku fiican tahay maro aad u adag: waxay leedahay xidhmo xoog leh oo loogu talagalay qaadista maro aad u adag.
threader toos ah oo loogu talagalay dunta fudud oo degdega ah.
Tolmo badan ayaa diyaar u ah: daabacaadda, godad badhannada, xidhidhiyaha badhamada, tolida qurxinta ee...
FANAANADA tayada la dammaanad qaaday! Calaamadda N.1 ee adduunka ee mishiinnada dharka.
Fanaanada Haute Couture -...
Fudud oo dhamaystiran: aad u dhamaystiran laakiin isla mar ahaantaana ay fududahay in la isticmaalo. Dareen leh, waxay u oggolaan doontaa xitaa ...
Tolida saxda ah ee marado culus: cag labajibbaaran, matoor awood badan oo jiilkii ugu dambeeyay, jillaab...
Waxqabad, anfacaya oo adkaysi u leh: jir bir ah oo loogu talagalay nolosha dheer ee mashiinka. Miiska...
Cudud Xor ah oo Waasac ah: Gacanta xorta ah ee mashiinkan tolida waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u tosho meelaha...
Daabacaad xaddidan oo gaar ah: oo ka mid ah awoodaha Singer Haute Couture cusub waxaan ka helnaa...
Mashiinka elektarooniga ah ee loo qoondeeyay koofiyadda
6 godad 1 mar ah
threader si toos ah
Elektroonik oo leh 100 tol: samee wax kasta oo aad rabto, shaqsiyayso oo qurxi gurigaaga iyo dharkaaga...
threader toos ah oo loogu talagalay dunta fudud oo degdega ah
Elektroonik oo leh 60 tol: samee wax kasta oo aad rabto, shaqsiyayso oo qurxi gurigaaga iyo dharkaaga...
FANAANADA tayada la dammaanad qaaday! Calaamadda N.1 ee adduunka ee mishiinnada dharka
Iyadoo wadar ahaan 600 nooc oo tolan, waxaynu hore u ogaanay in ay ina soo food saartay mishiinka dharka lagu tolo oo aynu ku siin karno maskax bilaasha. Waxay leedahay hawlaha xusuusta iyo sidoo kale, haddii aad rabto shaqo aad u raaxo leh, ma jiraan wax la mid ah doorashada miiskeeda la fidin karo. Badhanka tolmada muraayadda, iyo sidoo kale 24 boos oo irbado ah iyo qalab aan dhammaad lahayn ayaa dhammaystiraya xulashada weyn ee kan oo kale ah.
Isticmaalayaashu waxay u tixgeliyaan sida mid ka mid ah mashiinada tolida ee Fannaaniinta ugu fiican, awooddo halkan ku noqo ee loogu talagalay 503 Euro.
Heesaaga Quantum Stylist 9980
Qaar ka mid ah 820 tolmo, ayaa mar kale tilmaamaya in aan wajaheyno doorasho weyn, si aan u fulinno shaqooyin kala duwan iyo dhammaantood, oo leh dhamaystir xirfadeed. Waxa kale oo ay leedahay qaar 13 cagood cadaadis ah. Laakiin taasi dhammaanteed maaha, maadaama aynaan ilaawi karin shanta xaraf, iyo sidoo kale dunta dunta oo toos ah.
Waxaan ku heli karnaa dhammaan kuwa kor ku xusan ilaa 540 euro. Haddii aad xiisaynayso, halkan ka iibso
Heesaaga Quantum Stylist 9985 Touch
Xaaladdan oo kale waxaan ogaanay ilaa 960 tol. Intaa waxaa dheer, waxaan heli doonaa fududaynta wax walba oo taabasho fudud, mahad ah shaashadda taabashada. Waxay leedahay xasuus iyo maarayn sahlan. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay 13 cagood oo riixaya iyo dunta toos ah.
Dhammaan sifooyinkaas waa la soo dhaweynayaa inkastoo ay kordhiyeen qiimaha mashiinka ilaa 799 euros, inkastoo ay run ahaantii u qalanto haddii ay ku dhacdo miisaaniyadaada. Haddii aad rabto, waxaad iibsan kartaa Singer Quantum Stylish 9985 Touch mishiinka aquí.
Fanaanada Patchwork 7285Q
Mashiin elektaroonik ah, oo loogu talagalay dhammaan taageerayaasha patchwork. Thanks iyada waad heli kartaa waxqabadka ugu badan ee patchwork iyo quilting labadaba. 100 ka mid ah tolkeeda, waxaad ku xisaabtami kartaa 9 aasaasiga ah iyo 15 gaar ah oo farsamooyinkan ah. Intaa waxaa dheer, wadar ahaan 61 waa waxa loogu yeero tolmada qurxinta.
Waxaas oo dhan ilaa 397 euro. hadda iibso aquí.
Heesta Kalsoonida 7463
Mashiinka tolida ee Fannaaniinta ayaa leh 30 tol. Dhererka iyo ballaca isku mid ah waa 7 mm. Waxay leedahay tayo sare leh, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah mashiinnada dharka elektiroonigga ah ee la jecel yahay. The tollayntu waa la xoojin doonaa oo dhammayn wanaagsan baa la samayn doonaa.
Qiimaha mishiinkani waxa uu ku dhawyahay 240 yuuro hadii aad jeclayd sifooyinkiisa waad awoodaa halkan ka iibso
dunta aadka u fudud ayaa ah waxa ka dhigaya mashiinkan tolida inuu ciyaaro ilmaha. Saddex nalalka LED, iyo sidoo kale 225 nooc oo tolmo ah iyo kontorool koronto irbad laba jibaaran, waxay ka dhigi doonaan shaqadaada in ka badan xirfadle. Dhererka tol kasta wuxuu noqon doonaa 4 mm, ballacuna 7 mm.
Qiimaha Fannaanka Curvy 8770 wuxuu ku dhow yahay 429 euro oo aad awoodid halkan ka iibso
Fanaanada Koowaad - Mashiinka...
Mashiinka tolida elektarooniga ah ee Fanaanada One ayaa leh qaar 24 tolmo oo horay loo tolay. Intaa waxaa dheer, nidaamka dunta si toos ah, gacanta xorta ah iyo hawlaha xusuusta. . Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa erayo waaweyn. Shaashad, lix indho-shareer iyo alifbeetada. Aan iloobin tirada badan ee qalabka ay keento. inta kale waad eegi kartaa
Qiimaheeda waa la dhimay oo waad awoodaa halkan ka iibso
Heesaha Mashiinada Xardho
Heesaaga Legacy SE 300 -...
Waxaan wajahaynaa mid ka mid ah Mashiinnada dharka lagu tolo iyo kuwa wax lagu daabaco ee heesaha. Waxay leedahay 250 tolmo tolid ah iyo 200 oo tolmo daabac ah. Intaa waxaa dheer, waxaad haysataa 6 ikhtiyaar oo alifbeetada ah qalab lagu wareejinayo daabacaadda USB. Meelaynta racks waa mid aad u fudud.
Si aad u awooddo u shaqee sida ugu raaxada badanWaxay leedahay aag ka weyn. Mashiinkan daabacaadda ayaa leh naqshad ay dhiirigelisay mashiinada tolida ee heesaaga guridda. Waxay leedahay laba raakidh, iyo sidoo kale shaashad taabasho ah iyo 800 tolliin daqiiqadii.
Qiimaheedu maaha mid raqiis ah laakiin waa iib oo haddii ay ku dhacdo miisaaniyadaada, waxaad ka iibsan kartaa halkan.
Fanaanada 230057140 Mustaqbal...
Waxaan wajahaynaa mishiin aad u fiican oo loogu talagalay dhar-tolidda iyo daabacaadda labadaba. Waxay leedahay 215 tol iyo 7 batoon hal mar. Maxaa intaas ka badan 250 xardhan iyo 20 farood. Hagaag, dhib ma yeelan doontid sababtoo ah dhammaan daabacadaha waa la beddeli karaa.
Mashiinka tolida elegtarooniga ah ee Futura XL-420 wuxuu sidoo kale ku fiicnaan doonaa daabacaadda iyo daabacaadda samee shaqo balastar ah. Waxa ay leedahay shan farood oo monogramming ah, iyo sidoo kale xakamaynta xawaaraha, alaarmiga iyo dareemayaasha dunta.
Waxay ku kacaysaa 1.199 euro, waxaadna ku iibsan kartaa kalsooni buuxda Halkan
Sida loo saliidayn karo fannaanka harqaanka
Mashiinka tolida kasta wuxuu u baahan yahay dayactir wanaagsan si uu u sii jiro sanado badan. Mid ka mid ah waa mashiinada tolida ee heesaaga saliid. Waxa la tilmaamay waa in la raaco tilmaamaha isku mid ah oo had iyo jeer la isticmaalo saliidda ujeedo badan oo isku mid ah.
Waxa had iyo jeer maskaxda lagu hayo ka hor inta aanad bilaabin waa in mishiinka aan la xidhin. Waxaan qaadnaa burush yar oo ka saarnaa nooc kasta oo wasakh ah oo ay yeelan karto. Waa inaan aad uga digtoonow meesha aan saliidda ku shubno. Qaybta saxda ah ee mishiinku uma baahna, taas oo ah sababta dareeruhu u yahay inuu ka fogaado tuubada.
Waxaan ku daadin doonaa mid ka mid ah dhibcaha ugu horreeya ee saliidda xagga sare iyo qaybta bidix ee mashiinka. Sidan, waxay ku dhici doontaa aagga irbadda. Isla bartii, waxaan ku dari karnaa dhibco cusub. Wax dhib ah ma leh in aan ka saarno huurada oo aan sidoo kale nadiifinno ilkaha quudinta.
Marka tan la sameeyo, waxaan hagaajineynaa cirbadda qaybta ugu sareysa waxaanan u hurnay nafteena haye bobbin. Waxaan ka saareynaa oo nadiifineynaa. Xaaladdan oo kale, waxaan sidoo kale mari karnaa in yar oo saliid ah iyaga, laakiin had iyo jeer waxay noqon doontaa dhowr dhibcood oo aan ka badnayn inta aan faraha ku marsaneyno. Qaybihii oo dhan waanu isku soo celinay oo tijaabinay. Isticmaal maro si aad u hubiso in aanay saliid soo bixin ama aanay wasakhayn.
Mishiinka tolida ee Fannaanadda ay u iibsadaan
Shaki la'aan, waa su'aasha weligeed ah. Waxaan ognahay in ay ina soo food saartay wax aad guud. Waxaa jira noocyo badan oo ah mishiinada tolida ee Fanaaniinta iyo sidaas oo kale, oo waliba leh qiimahooda kala duwan. Laakiin ka hor inta aanad xitaa ka fikirin, waa inaad naftaada waydiisaa su'aal. Maxaa faa'iido ah oo aan siinayaa?. Haddii aad leedahay nolol mashquul ah, taas oo aad u baahan tahay oo kaliya mashiinka hawlaha aasaasiga ah, markaa waxa fiican inaad doorato mid fudud oo qiimihiisu yahay 100 €. Waad ku mahadsan tahay waxaad ka bilaabi kartaa adduunka tolida laakiin had iyo jeer waxay leedahay xad.
Dhanka kale, haddii aad u baahan tahay wax dheeraad ah oo xirfad leh, markaa waxaad dooran kartaa mashiinnada sida Singer Heavy Duty ee noocyadeeda kala duwan ama Fannaanka Talent 3232 ee ku dhex jira farsamada. Dabcan, gudaha elektiroonigga ah waxa kale oo aad haysataa doorashooyin aad u fiican sida Singer Quantum. Xaaladahan, dhamaystirku waa xirfad badan, isla mar ahaantaana waxaad samayn kartaa shaqo culus oo aad leedahay noocyo kala duwan oo dhar ah.
Sidoo kale xusuusnow in doorashadaada ku saabsan isticmaalka mishiinka, waa inaad caddeysaa taas mashiinka elektaroonigga ah had iyo jeer wuxuu leeyahay tayo sare leh marka loo eego makaanikada. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqda ah in ay haystaan ​​matoor sax ah iyo in tolida loo xakameeyo si kooban. Kuwa elektiroonigga ah waxay badanaa leeyihiin noocyo badan oo tolmo ah iyo sidoo kale festoonka. Dabcan, oo leh dhibco badan oo wanaagsan, mashiinka noocan oo kale ah ayaa badanaa wax yar ka qaalisan.
Sida dunta loo tolo fannaanka
In kasta oo ay u ekaan karto xoogaa dhib badan, ma aha. Dabcan, wax yar oo ku celcelin ah waxaad ku samayn kartaa xitaa indhahaaga xiran. Ma doonaysaa in aad ogaato sida dunta loo tolo mashiinka tolista heesaaga? Hagaag, ha moogaanin tillaabo-tallaabo.
Sida loo isticmaalo mashiinka tolida ee heesaha
Haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo mashiinka tolida ee Fannaanka cusub, muuqaalka soo socda ayaa ku caawin doona:
Heesaa Mise Walaal?
Waxaa fooda inagu soo haysa laba xifaaltan weyn. Brother Waxa kale oo ay samaysay meel aad uga fiican qaybta. Waxaa la yiri labadaba inta badan waxay iibiyaan in ka badan 70% alaabadooda. Mid ka mid ah shirkadaha Japan oo soo bandhigayay hal-abuurkooda ugu wanaagsan in ka badan 100 sano.
Taasi waa sababta uu u gaadhay heerka ugu sarreeya ee Fannaanka. Xaaladdan oo kale, labaduba waxay leeyihiin qiimo lacageed oo mudan in la xuso. Dabcan, isticmaaleyaal badan ayaa wali ku sii dheggan astaanta heesta si ay u noqdaan mid ka mid ah hormoodka weyn. Shaki la'aan, waxaa jira doorashooyin dhammaan dhadhanka. Labaduba waxay leeyihiin qiimo aad u jaban, oo leh mashiinno tayo sare leh iyo dabcan, oo leh adkeysi sare.
Heesaa mise Toyota?
Mararka qaarkood taasna ma ogaanno tayada iyo waxqabadka mashiinka dharka lagu tolo maaha oo kaliya astaanta. Daryeelka iyo sidoo kale isticmaalka ayaa qeexi kara wax badan. Si la mid ah, waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa qaabka aan doorannay.
Waxay u muuqataa in isticmaaleyaal badani ay ka cabanayeen xoogaa mashiinnada Heesaha ee ugu dambeeyay ee aan u adkaysan karin dhammaystirkooda oo ay doortaan toyota mashiinada tolida. Sida caadiga ah, Fanaanada waxaan ka iibsaneynaa dhaqan soo jireen ah iyo sidoo kale hal-abuurnimo. Halka mishiinnada Toyota ay u taagan yihiin awooddooda iyo sidoo kale caabbinta ay u leeyihiin dhar qaro weyn leh. Kaliya adiga ayaa leh erayga ugu dambeeya!
Qalabka Tolida Fanaanada
Mid kale oo ka mid ah qodobbada wanaagsan ee astaanta sida Singer waa in uu leeyahay a qalab kala duwan. Waa in la sheegaa, sida caadiga ah, mid kasta oo ka mid ah mashiinnada ayaa mar hore la yimid qalab. Kuwa ugu caansan badanaa waa kuwan:
Cagaha wax lagu riixo ee kala duwan (caalami ah, godad badhan ama sibbooyin)
Pedal (waxay kuxirantahay nooca)
Gariiradda daboolan iyo dareemada
Haddii aad weli u baahan tahay wax dheeraad ah, waxaad haysataa dukaamada rasmiga ah ama dukaamada kale ee internetka sida Amazon, halkaas oo aad ka heli doonto wax kasta oo aad u baahan tahay qalabka heesaha. sida aad halkan ku arki karto.
Fikradayda ku saabsan mashiinka dharka lagu tolo ee Fanaanada
Marka aan aragno badeeco ay taageerto summad soo jireen ah, markaas waxay ina siinaysaa kalsooni badan. Tani waa tii dhacday markii aan u tagay inaan soo iibiyo mishiinka tolida ee ugu horreeya. Waa run in sida sumadaha la aamini karo ay jiraan dhowr laakiin markaan arkay, waxaa maskaxdayda ku soo dhacay kuwa ku jiray guriga awoowayaashay. Taasi waa sababta aan u doortay Singer oo waa inaan sheego inay tahay mid ka mid ah iibsiyada ugu wanaagsan ee aan abid sameeyo.
Marka ugu horeysa sababtoo ah iyaga oo leh dhaqan dheer oo iyaga ka dambeeya, waxay had iyo jeer doortaan moodallo cusub, hagaajintooda iyo inay mar walba la qabsadaan baahiyahayaga. Laakiin waxaas oo dhan, oo leh qiimo lacageed oo aad u cajiib ah. Tan iyo xaaladdeyda, waxaan ku raaxaysan karaa mashiinka tolida oo dhammaystiran oo aan bixiyay wax ka yar intii aan filayay.
Qalabka iyo dhammayntooda ayaa waliba aad u qiimo badan. Waxay yihiin kuwo adkaysi u leh, taas oo muujinaysa inay ila joogi doonaan wakhti dheer, sida kuwii hore. Qaabkeedu waa ergonomic si marka la shaqeynayo, wax walbaa ay yihiin kuwo raaxo leh oo loo dulqaadan karo. Waxyaabaha cajiibka ah waa natiijooyinkeeda weyn, gaar ahaan kuwa saxda ah. Shaqadu waxay runtii ku dhammaatay dhammaystir xirfadeed iyo iyada oo aan mashiinku istaagin. Ugu yaraan 12-kii sano ee aan la joogay, wax dhibaato ah ima ay siin. Sababtan awgeed, waa mid ka mid ah iibsiyada ugu fiican ee aan sameeyay.
Mashiinka dharka » Mashiinnada dharka lagu tolo ee heesaha